E nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe iwu ịkwụ ụgwọ dị rụọ ọrụ. Dị ka ihe atụ, chee echiche banyere ọnọdụ onye ọrụ were ọghọm na ya na-arụ na ọrụ ya. N'ọnọdụ dị otú a, enwere ike ijide onye were ya n'ọrụ mgbe ụfọdụ n'iwu onye ọrụ maka mmebi a na-eme ya.
E nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe iwu ịkwụ ụgwọ dị rụọ ọrụ. Dị ka ihe atụ, chee echiche banyere ọnọdụ onye ọrụ were ọghọm na ya na-arụ na ọrụ ya. N'ọnọdụ dị otú a, enwere ike ijide onye were ya n'ọrụ mgbe ụfọdụ n'iwu onye ọrụ maka mmebi a na-eme ya. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ijide ndị nrụpụta. Nke a bụ ikpe mgbe onye na-azụ ahịa na-ata ahụhụ ihe mebiri emebi ya na-egosikwa na ihe ahụ mebiri na ngwaahịa ahụ sitere na ntụpọ dị na ngwaahịa a. Ọzọkwa, onye isi ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe ọrụ dịịrị ya na mgbakwunye na ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ.
> Ibu onye were ya n’uche
> Onye isi Director
> Ibu iwu nke di na nmejọ
> Ibu ọrụ ọkachamara
You ga - ejide gị dị ka iwu ma ọ bụ ka ịchọrọ ijide mmadụ ka ọ bụrụ ọrụ gị? Ikike inweta iwu si Law & More ga-enwe obi ụtọ inye gị nkwado iwu.
Ihe atụ nke anyị nwere ike inyere gị aka:
• Ibu ọrụ nke onye were gị n'ọrụ;
• ụgwọ ọrụ ngwaahịa;
• ụgwọ nke onye isi;
• ụgwọ siri ike;
• Ibe iwu na-emezighị emezi;
• Ibu ọrụ ọkachamara
Ibu onye were ya n’uche
Ọ bụrụ na onye ọrụ merụrụ ahụ n'ihe ọghọm n'oge ma ọ bụ n'ihe metụtara ọrụ ya, onye were ya n'ọrụ nwere ike ịkwụ onye ọrụ ahụ ụgwọ maka mmebi ahụ mere. Nke a bụ n'ihi na onye were ya n'ọrụ nwere ọrụ pụrụ iche nke ilekọta mgbe a na-arụ ọrụ ahụ. Ọ ga-akwụ ụgwọ maka mmebi nke onye ọrụ merụrụ n'oge arụmọrụ ọrụ ya, belụsọ na ọ ga - egosikwa na ọ rụzuru ọrụ nlekọta. Ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ nwere ike igosipụta na o meela ihe niile ezi uche dị na ya iji gbochie ihe ọghọm, ọ bụghị iwu ga-akpata ya. Ọzọkwa, n’ọnọdụ ndị onye e were n’ọrụ kpachapụrụ anya ma ọ bụ kpachara anya mee, a gaghị ata onye ọ na-arụrụ ọrụ ụta. Anyị na-elele eziokwu niile na ọnọdụ niile, anyị ga-enwekwa obi ụtọ inyere gị aka ma ọ bụrụ na ejidere gị dị ka onye were gị n'ọrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ijide onye were gị n'ọrụ ụgwọ maka mmebi a tara ahụhụ.
You na-emeso okwu maka mmebi ma ị ga-achọ enyemaka nke iwu na usoro ahụ?
Mgbe ịzụrụ ngwaahịa, ị na-atụ anya na ọ siri ike. Tụghị anya na iji ya ga-emerụ gị ahụ. O di nwute, nke a ka nwere ike ime. You nwere ike iche maka mmebi nke igwe na-emebi emebi, nri na ngwa ahịa ndị ọzọ.
Onye rụpụtara ya bụ ihe dịịrị mmebi iwu mebiri emebi mgbe egosiri na ọ bụ nkwarụ dị na ngwaahịa a. A na-ewere ngwaahịa dị ka nkwarụ ma ọ bụrụ na enyeghị nchekwa ị na-atụ anya ya. Ọ bụrụ n’inweta mmerụ ahụ site na ngwaahịa nrụrụ, anyị ga-enwe obi ụtọ inye gị nkwado iwu.
Onye isi Director
Na usoro, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ ndị etinyela. Agbanyeghị, onye isi ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe ọnọdụ dịịrị ya na mgbakwunye na ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie iwu ka onye isi maka ọrụ ya rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ịnwere gị dị ka onye nduzi nke ụlọ ọrụ iwu, nsonaazụ ya nwere ike ịbụ oke. Law & More na-enyere aka na ndị nduzi na-eche ihu ma ọ bụ yie egwu ebubo ebubo. Anyị na-enyere ndị ọzọ chọrọ ijide onye nduzi iwu ịkwụ ụgwọ.
Ibu iwu nke di na nmejọ
Ofdị ụgwọ a dabere na mmejọ ma ọ bụ nleghara anya. Ọ bụrụ na mmerụ ahụ, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ijide onye kpatara mbibi a n'ụzọ iwu. Nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị maka nkwado iwu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-akwụ gị ụgwọ maka mmebi ahụ.
Ibu ọrụ ọkachamara
Mgbe onye ọrụ aka onwe ya, dịka dọkịta, onye na-ahụ maka ego ma ọ bụ onye na-ede akwụkwọ, mehiere ọkachamara, a ga-ejide ya ma ọ bụrụ na ọ ga-agbaso ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrịa iwu. N’ime olee mgbe ụdị arụrụ ọrụ ọkachamara dị otú ahụ na-ewere ọnọdụ? Nke a bụ ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ. Azịza ya dabere na eziokwu na ọnọdụ nke ikpe ahụ.
Y’oburu na inwere onwe gi nke aka gi wee buru na i ji aka gi mee ihe di nma, anyi g’enwe obi inyere gi aka.